अनुहारमै आएर पा’देको भन्दै यी व्यक्तिले उठाए ख’तर’नाक कदम, छिमेकी सबै चकित ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/अनुहारमै आएर पा’देको भन्दै यी व्यक्तिले उठाए ख’तर’नाक कदम, छिमेकी सबै चकित !
अनुहारमै आएर पा’देको भन्दै यी व्यक्तिले उठाए ख’तर’नाक कदम, छिमेकी सबै चकित !
एजेन्सी। इन्डोनेसियामा ३७ वर्षीय एक पुरुषले आफ्ना छिमेकीलाई हँसिया र माशेट (एकप्रकारको ब’न्चरो) ले आ क्र म ण गरेका छन् । छिमेकीले मजाक गर्दै घरिघरि आफ्नो अनुहारमा आएर पादेपछि रि’साएर उनले आ क्र म ण गरेका हुन् ।आ क्र म ण गर्ने व्यक्तिको नाम एएस भनेर चिनाइएको छ र उनलाई पश्चिम सुमात्रा प्रान्तको पादाङ शहरमा प’क्राउ गरिएको छ । उनले छिमेकीलाई गत मंगलवार आ क्र म ण गरेका थिए ।
छिमेकी एफजीको स्थिति ग’म्भीर छ भने उनकी पत्नी एनआरडीको हात र कानमा चो’टप’ट’क लागेको छ । प्रहरीका अनुसार, निर्माण कामदार एसलाई एफजीले मजाक गर्दै अघिल्लो साता अनुहारमै पा’देका थिए ।एएस रि’सले मु’र्मुरिएका थिए र आ’क्रमणको योजना बुनिरहेका थिए । घ’टनाको दिन बिहान ७ बजे छिमेकी सुतिरहेका बेलामा घरमा पसेर उनले आ क्र म ण गरेका थिए ।
उनले एफजीको टा’उको र छातीमा म्याशेटले हि’र्का’एका थिए । ह’ल्लाख’ल्ला भएपछि एफजीकी पत्नी आइपुगेकी थिइन् । उनले आ क्र म ण रोक्न खोज्दा उनलाई पनि चो’टपट’क लागेको थियो । पछि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बोलाइयो अनि पतिपत्नीलाई नै अस्पताल लगियो ।एएसलाई त्यसपछि प’क्रा’उ गरियो । उनले आफ्नो अनुहारमै आएर पादेकाले रि’स उठेर छिमेकीलाई आ क्र म ण गरेको स्वीकारे । ‘अरू कुनै समस्या छैन, उनीहरूले अघिल्लो साता मेरो अनुहारमा पादेका मात्र हुन्,’ उनले भने ।
आफू छिमेकीहरूसँग कहिल्यै नजिक नभएको र उनीहरूसँग हँसीमजाक गर्ने नगरेको उनले बताए । अर्थात् पा’द्ने घ’ट’नाले उनलाई अ’पमा’नित अनुभव गरायो । एएसमाथि ज्यान मा र्ने उद्योगको मु’द्दा चलाइएको छ र आठ वर्षसम्मको स’जा’य दिइने सम्भावना छ ।प्रहरीले यस घ’टनाका पछाडि अर्को कारण पनि छ कि भनी अनुसन्धान गरिरहेको छ । एफजी अस्पतालमा बसेर निको भइरहेको र उनको स्वास्थ्य ग’म्भीर नरहेको बताइएको छ ।
निरन्तर बढीरहेको सुनको मूल्य आज घट्यो
घटस्थापनाको भोलिपल्टबाट मात्रै खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न पाइने
कतारले दियो १७ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी, खुशी हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए धन्यावाद